Niger: dagaalka uranium - dokumenti - Afrikhepri Fondation
Niger: Dagaalkii Uranium - Documentary
Umajirto ku tiirsanaanta tamar oo horseedda dhammaan waalalka. In France, March 29 2014 ololaha "Earth Hour", baxshay for munaasabadda "Spider-nin hawlgalka", waa addoon hore toona bililiqeysiga kheyraadka macdanta ay ka mid yihiin Niger ama wasakhda ka mid ah gobollada oo dhan ama nolosha, kuwa aan wax xadin na bartay iyo siiyey qoomamo ku filan inay ku damiyaan nalalka hal saac. Saacad ah sannadkii si cad oo kale ma noqon doonto wax xiiso leh ama mid calaamad ah ... Anyway.
"Maxaan hadda sameyneynaa meydhaan la'aan? Xaggee ayaad ku dhejisey Iskudhexaad? "
maalintaas si sax ah adduunka oo dhan, dadka qaarkood Gumaysiga dal oo xoolo ah oo dhan cayn kasta oo kibir waa waalidka si farxad baxay laambadda iyo raba dhoola oo ballaadhan indhaha la qaboojiyey ay daruuri tahay si fudud "u dhowow isbeddelka cimilada dareenka Horumar ". Aynu sheegno iftiin xun: isbedelka cimilada ee ay sababeen isticmaalka xad-dhaafka ah, oo ay isbedelayaan naftooda oo ay ka caroodeen, waxay sii wadi doonaan inay joogteeyaan, hubaalna wax dhibaato ah kuma yeelan doonaan inay iloobaan lixdan daqiiqo. Inkastoo bilyan milyanka dadka dunida ku nool ay sii wadi doonaan in ay ku noolaadaan la'aan koronto maadaama ay sameeyaan habeen kasta oo kale ee sanadka.
Jaqsi iyo caajis, haddii aysan ahayn mid aad u daran. Ku tiirsanaanta tamarta oo u horseedaysa xaqiiqda dhabta oo dhan iyo inta badan dhaqamada kale, dhaqamada kale, qiimaha kale.
Tusaale ahaan, oo ku dhex jira waalli this, in 1972, taasi oo markii dambe u noqday Areva markaas loo yaqaan COGEMA iyo caleemo macdanta uranium Arlit ee Niger. Faransiiska wuxuu ahaa mid xasaasi ah oo ku saabsan mashiinada iyo tiknoolajiyada lagu farsameeyey faa'idada ku taala gobolka semi-lamadegga ee ka kooban dhamaan qaybta waqooyiga ee dalka Niger, dhulka Tuaregs. COGEMA, weheliso-hawlgalayaasha Yurub, waxay abuurtaa labada shirkadood macdanta: SOMAIR iyo COMINAK oo gobolka Faransiis ahaa aqlabiyad ballaadhan. Dawlada Nayjeeriya waxay madax banaanaatay muddo toban sano ah, waxaana muuqata inaysan haysanin habka maalgashiga. Sidaasi darteedna wuxuu helay kaliya faa'iido bixinta Dowlad Faransiis ah. Maanta, Niger ayaa weli ku qanacsan ku dhawaad ​​kala badh ka mid ah dhoofinta yurubiyanka Faransiiska.
Si kastaba ha ahaatee, dakhliga celceliska ah ee Niger waa euros 25 bil kasta iyo in ka badan 90% of Nigeria ayaa ma helaan korontada. Sanadihii la soo dhaafay ee 47, dadka reer Nigeria marnaba wax faa'iido ah kama helin waxyaabahan uraniuminta. Taas bedelkeeda. On site, sulfuric acid ee loo baahan yahay dhejiska xeedhiga sida raadiyaha firfircoon ee raadiyaha leh iyo walxaha shimbiraha ah ee laga soo saaro laga soo saaro waxaa ka mid ah AREVA. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, illaa iyo konton sano si ay noogu adeegto, "calanka qaranka" ayaa nala isticmaali doona oo aan u dhignaa miisaska biyaha aan nadiifka ahayn ee isticmaala dadka Tuareg degaanka.
Haddaba maxaad dadka ugu caasiyoobaysaan?
Maxay tahay sababta ay u haystaan ​​la haystayaasha iyo handadaada miinooyinka?
Sidee loo maqli karaa, difaaci kara xuduudahooda iyo mustaqbalka carruurtooda iyaga oo aan khasab ahayn in ay aadaan argagixisada ama argagixisada?
Dukumintigaan oo ah xaqiiqo dhif ah, oo lagu magacaabo "Niger: Battle of Uranium" waxay ka timaadaa 2012 waxayna na qaadataa saacad. Laakiin wakhtigaas ugu yaraan, halkan waxaa na loogu digay oo si macquul ah u iftiiminaya muddo.
Niger: Dagaalkii Uranium - Alert Green
5 cusub oo ka yimid € 16,49
1 waxaa laga isticmaalay € 35,74
Iibso 16,49 €
laga bilaabo Sebtember 22, 2020 8:53
Taariikhda lagu sii daynayo 2009-05-19T00:00:01Z
Publication Taariikhda 2009-05-14T00:00:01Z
Nolosha Sirta ah ee Geedaha - Peter Wohlleben (Audio)